Ukuguquka kwesimo sezulu kuzokwandisa ukufa kwabantu emazingeni okushisa aphezulu eCatalonia | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengoba ngishilo ezihlokweni ezedlule ukuguquka kwesimo sezulu futhi imiphumela yayo isongela iCatalonia. Phakathi kwabo siyathola ukukhuphuka kolwandle kanye nokuhlehla kwamabhishi. Lezi yizo ezizothinta kakhulu iCatalonia eminyakeni ezayo.
ikhishiwe umbiko ngokuguquka kwesimo sezulu eCatalonia futhi wethulwe eBarcelona. Lo mbhalo uqukethe cishe amakhasi angama-624 futhi ulungiswe ngongoti abayi-141 abavela emanyuvesi nasezikhungweni zocwaningo. Ukuguquka kwesimo sezulu kuzothinta kanjani iCatalonia?
1 Umbiko Wesithathu Ngokuguquka Kwesimo Sezulu eCatalonia
2 Imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu eCatalonia
3 Izimpendulo kulokhu
Umbiko Wesithathu Ngokuguquka Kwesimo Sezulu eCatalonia
Umbiko uxwayisa ukukhuphuka okuphezulu ngokungajwayelekile kwamazinga okushisa nokuthi ingakhuphula ukufa kwabantu ngenxa yokushisa kwaminyaka yonke. Omunye wemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ukwanda kokuvama kokushisa namaza abandayo nokuqina kwawo. Yingakho ukufa kwamagagasi okushisa kungakhuphuka njengoba kwenza amagagasi okushisa.
Kuze kube manje, ukufa kwabantu minyaka yonke ngamagagasi okushisa eCatalonia cishe kungama-300. Kodwa-ke, ngokwalo mbiko oshicilelwe, bangafinyelela ku-2.500 2050 ngo-XNUMX. Ingxenye yabantu abathinteke kakhulu ngamagagasi okushisa kungaba ngabantu asebekhulile nabantu abanezifo ezingamahlalakhona ezedlule.
Ngokombiko, izinga lokushisa elijwayelekile leCatalonia lenyuke ngo 1,55 degrees kusuka kuma-50s. Njengoba imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu inyuka ngenxa yokwanda kwamagesi abamba ukushisa emkhathini, ukushisa namazinga okushisa kuzokwanda. Kulinganiselwa ukuthi ngo-2050 izinga lokushisa elijwayelekile lizokhuphuka ngama-1,4 degrees ngaphezulu.
Ngaphezu kwalokho, sikhuluma ngokufa okubangelwa ukushisa, kepha kulokhu kufanele sengeze ukuthi ukwanda kokungcoliswa komhlaba kuzobhebhethekiswa amazinga okushisa aphakeme nokuthi okwamanje kulinganiselwa ukuthi kubangela ukufa kwabantu ngaphambi kwezikhathi ezingama-3.500 XNUMX ngenxa yomonakalo unyaka nonyaka.
Okwamanje, zonke izimpawu zokuguquka kwesimo sezulu ezenzekayo zikhomba ukukhuphuka kwamazinga okushisa aqine, lawa kungamaza okushisa, ubusuku obushisayo, njll. Kuzoba nobusuku lapho ayihambi ngaphansi kwama-degree angama-25.
Imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu eCatalonia
Umphumela wokuqala yisomiso. Ngo-2051, ngokusho kombiko, ukwehla okumaphakathi kwemithombo yamanzi kuzoba cishe u-10% emigodini yasePyrenean bese kuthi okungenani kube ngu-22% emigqonyeni yamalitha.
Ngokusobala, isomiso siholela emvuleni encane. Kuze kube manje, ukuguquka kwesimo sezulu akukawuthinti kakhulu umbuso wezimvula, kepha, ngo-2050 kulinganiselwa ukuncipha kwemvula -10% entwasahlobo, ehlobo nasekwindla.
Ngenxa yokwanda kwezinga lokushisa nezilinganiso, kuzoba nemvula encane ngesimo seqhwa. Ukuwa kweqhwa kuzokwanda ngokwandayo. Lo mbiko uncoma ukuthi kwandiswe umthamo wokukhiqiza iqhwa wokuzenzela ukuze izindawo zokungcebeleka ekushibilika eqhweni zikwazi ukuqeda ukushoda.
Njengawo wonke amadolobha anogu, ukukhuphuka kwamazinga olwandle kuyinkinga enkulu. Ulwandle lwaseCatalan lukhuphuka cishe ngamasentimitha amane ngeshumi leminyaka. Lezi zinguquko, umbiko uqoqa, kuhambisana nokwanda kweziphepho zasekwindla kanye nokufa okukhulu kwezinhlobo ezinjenge-coral noma i-posidonia.
Awusakwazi ukuphromotha ifayela le- ukuphika kulokho okwenzekayo nalokho okuzayo. Kukhona abantu abaphika ubukhona bokuguquka kwesimo sezulu futhi basola ohulumeni nososayensi ngokwenza ngokwesaba. Kodwa-ke, ubufakazi bukhona: ukwanda okujwayelekile kwamazinga okushisa, ukufuduka kanye nezinguquko kubude bezinkathi nakho kuzoba nemiphumela ekuhlaselweni yisifuba somoya kanye nokungezwani komzimba (njengamanje phakathi kuka-20% no-25% wabantu abahlukumezekile uhlobo lokungezwani komzimba).
Futhi ngengcuphe engaba khona yokuhlushwa izifo zasezindaweni ezishisayo ezifana nodenga, umalaleveva noma i-chikungunya, obekungezwa kwezinye izifo ezidluliswa ukonakala kwamanzi, kubhebhethekiswa yisomiso. Ngo-2100, ngokusho kombiko uqobo, iCatalonia ingahle yehle iye ku- ngo-13% imithombo yayo yamanzi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu kuzokwandisa ukufa kwabantu emazingeni okushisa aphezulu eCatalonia